Ezona ndawo zintle emhlabeni | Uhambo lweNdaba
UMariela Carril | 05/05/2022 17:00 | Ukuhlaziywa ukuba 05/05/2022 17:59 | Iindawo zokutyelela, Izikhokelo
Kwihlabathi elilawulwa yimifanekiso eqingqiweyo, inzima kakhulu xa uceba uhambo. Ngubani ongakhange ahendwe yinkangeleko yelizwe aze alungiselele yonke into ukuba ibe lapho? Ngaphaya kwezinto esinokuzithenga, iimbono, imbonakalo-mhlaba, amava, zizinto ezisikhuthazayo ukuba sihambe. Loo maxesha anqunyanyisiwe kuluhlu lwethu lwexesha lobuqu.
Masibone ke namhlanje iindawo ezintle kakhulu emhlabeni. Mhlawumbi unethamsanqa kwaye sele udibene nabanye ngokobuqu. Okanye hayi?
1 Intaba yaseKirkjufell
2 Amawa kaMoher
4 Amachibi ePlitvice
5 Indawo yetyuwa yase Uyuni
Le ntaba ise Iceland kwaye ndithatha eli thuba ukuthi i-Iceland ineendawo ezintle ngokumangalisayo. Ukuba uyayithanda indalo ethatha umoya wakho, ndingacwangcisa uhambo ngoku. Waziwa njengo "intaba yecawa" kwaye ikunxweme olusemantla eIceland, kufutshane nedolophu yaseGrundarfjörour, umgama nje weyure ezimbini ukusuka kwikomkhulu lesizwe.
Kungcono ukuyazi ngokwenza ukhenketho olupheleleyo lwe-Snaefellnes Peninsula, kwaye ukuba uqesha ipakethe, ngokuqinisekileyo iya kubandakanywa kuba kuthiwa Yeyona ntaba ifotoweyo kweli lizwe. Intaba ke inakho 463 mitha kwaye umfanekiso wakhe osikwe esibhakabhakeni ubusoloko usebenza njengesikhokelo nophawu kubahambi emhlabeni naselwandle. Emazantsi entaba kukho ichibi ethi, ngeentsuku ezicacileyo, ibonakalisa kakuhle iMt.
Kwakhona, yintaba leyo utshintsha umbala ngokwexesha lonyaka: Buhlaza ehlotyeni, bumdaka namhlophe ebusika kwaye bunomtsalane ngokwenene ngeentsuku xa ilanga lasezinzulwini zobusuku likhanya, malunga ne-equinox kaJuni. Kwaye ungakhankanyi phantsi kwezibane zasemantla eziphazamisayo!Phakathi kukaSeptemba noAprili.
Kufuphi, ukuhamba kancinci, zi Iingxangxasi zaseKirkjufellfoss. Ezi ngxangxasi zinemitsi emincinci emithathu kunye nomsinga othambileyo, kodwa umahluko wobude phakathi kwazo yeyona nto ilungileyo ngayo. Ukuba unomdla wokunyuka, kunokwenzeka ukwenza oko kwaye ujabulele iimbono ezilungileyo, zombini entabeni kunye neengxangxasi.
Ekugqibeleni, inyaniso: intaba ivela kwisizini 7 ye Game of Thrones, kwisiqendu "Emva kweDonga".
Lo mhlaba umhle kwaye unomtsalane ise-Ireland kwaye yenza inxalenye yembonakalo yomhlaba jikelele yeBurren. Bajonga iAtlantiki baze babaleke ngaselunxwemeni kangangeekhilomitha ezili-14. ngokwejoloji yakhiwe malunga nezigidi ezingama-320 kwiminyaka eyadlulayo kwaye namhlanje i-UNESCO ibafake kwiBurren Global Geopark.
Ngawona mawa adumileyo kweli lizwe kwaye aphakathi kwawona adumileyo ehlabathini. Ungabhalisela i Amawa amava kaMoher, kuchithwa imini yonke apha, yaye abantwana abahlawulisi imali yokungena. Kukho i Iimitha ezingama-800 zenethiwekhi yeendlela ekhuselekileyo kwaye egangathiweyo ekuvumela ukuba ukonwabele imbonakalo, jonga iiAran Islands, Galway Bay kunye neMaamtaurks emgama kwaye nkqu Kerry mgama.
ezininzi zinikezelwa Utyelelo olukhokelwayo, ukufunda ngembali yamawa kunye nommandla ngokwawo, unxweme olusentshona Ireland, kufutshane nelali Liscannor, kwi County Clare. Ungafika apho ngemoto, ngebhasi, ngebhayisekile, ngesithuthuthu okanye ngemoto. Okanye ukuhamba, kwakhona.
Ukwenza utyelelo lube lusuku oluhle ungahlala undwendwela iwebhusayithi esemthethweni ebandakanya uqikelelo lwemozulu kwaye ikuvumela ukuba uzilungelelanise ngcono. Ikwangumbono olungileyo ukutyelela amawa ngaphandle kweyure engxamisekileyo, kwaye ngokucacileyo, ukuphuma nokutshona kwelanga imbonakalo-mhlaba ikhethekile.
Ungabhatala ukungena ngokupheleleyo, okubandakanya utyelelo kwiZiko leeNdwendwe kunye nomboniso wokwenyani wenyani kunye nethiyetha, kunye nokuhamba ngeendlela kunye nokufikelela kwi-O'Brien Tower kunye ne-terrace yayo, isikhokelo esivakalayo, iimephu kunye nolwazi. Zonke 7 euro.
Le landscape echibini iseOstriya kwaye likhadi leposi. Ikwisithili esisezintabeni Isalkammergut, ecaleni kweLake Hallstatt kwaye kufutshane nemigodi yetyuwa emangalisayo. Ukuza kuthi ga kwinkulungwane ye-XNUMX kwakunokufikelelwa kuphela ngesikhephe okanye ngeendlela zeentaba ezingakhululekanga kakhulu, kodwa yonke into yaqala ukutshintsha ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX ngokwakhiwa kwendlela eyayisikwe kwilitye lentaba ngokwayo.
Intle indawo. Ilali inesikwere esithandekayo esinomthombo phakathi, abanye Iicawa zamandulo, kwisitayile seGothic kunye ne-neo-Gothic, i-ossuary entle enamakhakhayi angama-1200, inqaba yenkulungwane ye-XNUMX apho ivenkile yokutyela isebenza ngoku, ichibi ngokwalo, elinomtsalane kwaye lizele ziintlanzi, kukho neengxangxasi kwaye phakathi kwezona ndawo zintsha kunye nezibalo zabakhenkethi. i 5 Iminwe Lookout, enomhlaba ocacileyo nomile okweminwe ephuma entabeni.
Ekugqibeleni, utyelelo kwi Imigodi yetyuwa Awukwazi ukuphosa. Kuthiwa unguye owona mgodi umdala wetyuwa ehlabathini kuba sele inamawaka asixhenxe eminyaka yokuxhaphaza. Ungafika apho ngeenyawo okanye nge-funicular kwaye kukho imyuziyam ngaphakathi.
La machibi amangalisayo e-Croatia kwaye benze ipaki yesizwe eyeyona paki indala elizweni. I-UNESCO ikwabandakanyile kuluhlu lwayo lwe ILifa leMveli leHlabathiewe La machibi akummandla wekarst kumbindi welizwe, kanye kumda weBosnia neHerzegovina.
Indawo ekhuselweyo ine phantse 300 amawaka square kilometers, kunye namachibi ayo neengxangxasi. zibaliwe Amachibi e-16 lilonke ukubunjwa kwalo kusisiphumo sokudityaniswa kwemilambo emininzi yomphezulu kunye nemilambo kodwa nangaphantsi komhlaba. Ngokulandelayo, amachibi adityanisiwe kwaye alandela ukuhamba kwamanzi. Phakathi kwabo zahlulwe nge amadama endalo travertine, ifakwe apho bulwelwe, ngundo kunye neebhaktheriya ukutyhubela iinkulungwane.
La maxhoba endalo anobuthathaka kakhulu kwaye aphantse aphile, anxibelelana ngalo lonke ixesha nomoya, amanzi kunye nezityalo. Yiyo loo nto behlala bekhula. Kunokuthiwa ukuba amachibi apheleleyo ahlulwe abe ngamacandelo amabini, elinye liphezulu kwaye elinye liphantsi. ukuhla ukusuka kubude obuziimitha ezingama-636 ukuya kuma-503 eemitha kumgama oziikhilomitha ezisi-8. Umlambo i-Korona wenziwe ngamanzi aphuma echibini kwindawo ephantsi.
Kwaye ewe, la machibi aseCroatia zidume ngeemilo nemibala yazo, eluhlaza, blue, turquoise, imibala ihlala itshintsha ngokuxhomekeke kubuninzi beeminerali emanzini kwaye kuxhomekeke ekukhanyeni kwelanga. Amachibi, nawo, amalunga neekhilomitha ezingama-55 ukusuka kuLwandle lweAdriatic kunye nesixeko esiselunxwemeni saseSenj.
Indawo yetyuwa yase Uyuni
UMzantsi Melika unemihlaba engakholelekiyo kwaye enye yazo ikwimeko encinci ye Bholiviya. Yiyo intlango enkulu yetyuwa, eyona iphakamileyo emhlabeni, kunye kancinci ngaphezu 10 amawaka 500 square metres umphezulu.
Indawo yetyuwa iphumle kuyo 3650 yeemitha zokuphakama kwaye ikwiphondo laseBolivia likaDaniel Campos, kwisebe le Potosi, kwiindawo eziphakamileyo zeAndes. Kwiminyaka engama-40 lamawaka eyadlulayo kwakukho ichibi apha, iChibi iMinchín, kamva kwabakho elinye ichibi, yaye ekugqibeleni imozulu yayeka ukufuma yaza yoma yafudumala, ivelisa ityuwa ethe tyaba.
Kubonakala ngathi ityuwa iqulethe malunga ne-10 lezigidi zeetoni zetyuwa kunye neetoni ezingamawaka angama-25 zitsalwa minyaka le. Kodwa namhlanje ityuwa ayikuphela kwento ebalulekileyo, IUuni nayo ine-lithium kwaye i-lithium ibalulekile kwiibhetri zazo zonke izixhobo zethu zobuchwepheshe. Ukongeza, isetyenziselwa ukulinganisa iisathelayithi kuba ingcono ngokuphindwe kahlanu kunolwandle ngenjongo enye.
I-salar inobunzima obutshintsha phakathi kwemitha engaphantsi kwemitha enye kunye neshumi leemitha kunye ubunzulu bayo buziimitha ezili-120, phakathi kwetyuwa nodaka. Yile brine ene-boron, i-potassium, i-magnesium, i-sodium kunye ne-lithium, phakathi kwabanye.
Ewe, yenye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi eBolivia kwaye ngaphandle kobhubhani bamalunga nama-300 amawaka abantu abayityelelayo nyaka ngamnye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo zokutyelela » Uninzi lweendawo ezintle zehlabathi